मौसमी रुघाखोकी र कोभिडका लक्षण उस्तै, कसरी छुट्टाउने? « Sansar News
११ माघ २०७८, मंगलवार १७:४७
काठमाडाैं । कोभिड महामारीकाबीच मौसममा देखिएको प्रभावका कारण कोभिड जस्तै लक्षण भएका मानिसहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। काठमाडाैं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ।
यसले मौसमी फ्लू वा रुघाखोकी लागेका मानिसहरू डराएका र परीक्षण गर्ने गरेका छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको क्लीनीकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार कोरोनाभाइरसको ओमिक्रोन भेरिअन्टको सङ्क्रमणमा देखिने लक्षण र प्रत्येक वर्ष जाडोको बेला देखिने स्वास्थ्य समस्यामा धेरै हदसम्म समानता छ। ”यसले गर्दा यो वा त्यो भनेर [परीक्षण नगरी] छुट्टाउन गाह्रो छ,” डा. पुनले भने।
फ्लूमा अचानक ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने हुन्छ भने चिसोले हुने रुघाखोकीमा नाकबाट पानी बग्ने र हाच्छिउँ आउने अवस्था हुन्छ।
नेपालमा हाल फैलिएको भनिएको कोभिडको ओमिक्रोन भेरिअन्टको लक्षण पनि फ्लू र रुघाखोकी जस्तै रहेको डा. पुनको भनाइ छ।
ओमिक्रोनका लक्षण के-के हुन ?
हाल विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को ओमिक्रोन भेरिअन्ट निकै सङ्क्रामक रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
तर यो प्रकारको कोरोनाभाइरसले विगतका भेरिअन्टभन्दा मध्यम खालका लक्षणहरू देखाइरहेको र रुघाखोकी वा फ्लूसँग मिल्दोजुल्दो बनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी रुघाखोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, घाटी खसखस गर्ने, टाउको दुख्ने वा पखाला लाग्ने जुनसुकै लक्षण भए पनि सबैभन्दा पहिले महामारीको समयमा भएकाले कोभिडकै सङ्क्रमण चक्रमा आफू रहेको बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।
”त्यस्तो भयो भने परीक्षण गर्ने, अलग्गै बस्ने वा सावधानी लिने कुरा आउँछ। होइन यो मौसमी रुघाखोकीको बेला हो भनेर हामीले बुझ्यौँ भने कोभिड-१९ को सङ्क्रमण झनै फैलिएर भयावह हुनसक्छ,” उनले भने।
डा. पुनले भने ओमिक्रोनको लक्षणलाई डेङ्गीका लक्षण जस्तै रूपमा आफूले हेर्ने गरेको बताउँछन्।
डेङ्गी हुँदा बिरामीहरूले टाउकोको अगाडिको भाग वा आँखा नजिकको भाग एकदमै दुखेको वा जिउ एकदमै दुखेको महसुस गर्ने उनको भनाइ छ।
“रुघाखोकीमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मन्द हुन्छ। कोभिडको हकमा टाउको दुख्ने अनि जिउ दुख्ने करा दुई कदम अघि बढे जस्तो देखिन्छ,” उनले भने।
त्यसबाहेक रुघाखोकीमा घाँटी दुख्ने वा खसखसाउने भए पनि त्यो मन्द हुन्छ। ओमिक्रोन भेरिअन्टबाट सङ्क्रमित भएकाहरूमा त्यस्तो दुखाइ पनि अलि बढी हुने उनी बताउँछन्।
तर अरूलाई सर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूले सतर्कता अपनाउने र एकान्तवासमा बस्ने जस्ता कार्यहरू भने गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
“समान लक्षण समान भए हैजा फैलिएको ठाउँमा सबैको हैजा परीक्षण त गर्नुपर्दैन,” डा. पुनले भने।
तर कसैमा लक्षण सक्रिय रहेको अवस्थामा भने त्यो अवधिभर र लक्षण हराएको तीन दिन थप एकान्तवासमा बस्नुपर्ने उनी बताउँछन्। बीबीसीबाट